Isamsung ayizukuhlaziya i-Galaxy S8 kunye neNqaku 8 kwi-UI One | I-Androidsis
Ukuba uneGPS S8 okanye iNqaku 8, uphelelwa yi-UI enye, ujongano olutsha lweSamsung
Enye yekalika kunye nenye yesanti eneSamsung. Kwaye yonke into ibonakala ngathi ithengisa ngakumbi, kuba i-Samsung ayizukuhlaziya i-Galaxy S8 kunye neNqaku 8 ngonxibelelwano olutsha lwe-UI eboniswe izolo. Oko kukuthi, xa bekufanele ukuba bayayifumana, i-Samsung iya kusuka esiphelweni sayo kunyaka ophelileyo.
Kwaye inyaniso ukuba asiqondi ukuba kutheniNgaphandle kokuba uphawu lwaseKorea lufuna ukophula amanani alo okuthengisa kunye neGPS S10, kuba iyakubandakanya i-UI entsha entsha njengeGPS S9 kunye neNqaku 9; iindaba esizaziyo nathi namhlanje.
Xa i-Samsung yenze isidenge sokhuphiswano nenotshi yayo, Siyayazi loo nto ujongano olutsha lwe-UI que ivuselela ngokupheleleyo Amava eSamsung, iya kudlula ngeGPS S8 kunye neNqaku 8.
Kwiinyanga ezi-3 emva kokuba beneminyaka emi-2 ubudala Yobomi, ingqayi yamanzi abandayo kubanini beGPS S8 kunye neNqaku 8. Ngokukodwa ujongano oluya kufaneleka kwimowudi emnyama, kugxilwe kunxibelelwano lwesandla esinye okanye yonke into ithathe umbala umbala wefowuni .
Ndiyathetha, yintoni Kuphela yi-Galaxy S9 kunye neNqaku 9 eya kufumana i-UI enyeNgaphandle kweGPS S10 elandelayo eza kubonisa ezinye zezi teknoloji zintsha. Ngapha koko, siza kubona ukuba yonke into iphela njani, kuba ayenzeki kuthi ukuba i-Galaxy S8 ayifumani i-Android Pie nangayiphi na indlela. Ngokukodwa xa beza kugqiba iminyaka emi-2 ubudala kwaye zezinye zeefowuni ezisika kakhulu namhlanje; ithengiwe yafunyanwa ngabaninzi.
Njengoko besitshilo, enye yekalika kunye nenye yesanti kwi-Samsung ngubani ofuna ukwaphula yonke into ngeGPS S10 elandelayo kunye nescreen esitsha esingapheliyo esiza kufihla ikhamera emva kwescreen.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Ukuba uneGPS S8 okanye iNqaku 8, uphelelwa yi-UI enye, ujongano olutsha lweSamsung
[APK] Ngoku unokukhuphela ii-SEGA Heroes ze-Android kunye ne-Sonic kunye nezinye ezininzi